Dugsiyada dalka oo la furi doono 4-ta bisha koowaad ee 2021 – Radio Damal
Dugsiyada dalka oo la furi doono 4-ta bisha koowaad ee 2021
Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Prof. Geore Magoha ayaa maanta shaaciyay in fasallada kale ee dugsiyada dalka dib loo furi doono 4-ta bisha koowaad ee sannadka 2021-ka.
Sidoo kale waxaa taariikhdan la furayaa dugsiyada heerka caalamiga ee loo yaqaano International schools.
12-kii bishii hore ayay ahayd markii ardayda fasallada afaraad iyo sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe iyo ardayda fasalka afaraad ee dugsiyada sare ay dib u billowdeen casharadooda.
Magoha ayaa hoosta ka xarriiqay in xarumaha waxbarashada marka la furo horraanta bisha Jannaayo ee sannadka dambe ay shaqeyn doonaan ilaa 19-ka bisha saddexaad ee Maarso oo la xiri doono muddo 7 isbuuc ah.
Inta ay ardayda fasax yihiin waxaa la sameynaya imtixaannada qaran ee KCPE-da oo ay ardayda u fariisan doonaan laga billaabo 22-ka bisha saddexaad iyo KCSE-da oo la sameyn doono inta u dhexeysa bisha saddexaad iyo bisha afaraad halka imtixaannada mudadan gudaheeda lagu sixi doono.
Wasiirka ayaa xusay in dhammaan ardayda hadda xaafadaha ku sugan ay xilligaas dugsiyada tagi doonaan sidaas awgeedna waalidiinta laga doonayo inay u diyaar garoobaan.
Magoha ayaa intaa ku daray in carruurta ay da’doodu tahay 4 sano ay bisha toddobaad ee sannadka dambe ku biirayaan heerka ugu hooseeya waxbarashada ee PP1 .
Ardayda hadda dhigata fasalka afaraad ee dugsiyada hoose dhexe ayaa bisha toddobaad ee sannadka 2021-ka u gudbi doono fasalka shanaad waxayna xarumaha waxbarashada iska xaadirin doonaan 26-ka bisha July.
Prof. George Magoha oo shir jaraa’id ku qabtay Nairobi ayaa sheegay in marka ay ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare dib ugu laabtaan iskuulada bisha koowaad ee sannadka cusub in loo tixgalinayo sida sannad dugsiyedka labaad ee waxbarashada.
Wasiirka ayaa shacabka u xaqiijiyay in dowladda ay ka go’an tahay sidii howlaha tacliinta ay si habsami leh ugu socon lahayeen.
Bartamihi bishii saddexaad ee sannadkan ayey ahayd markii dhamaan goobaha waxbarashada irdaha la isugu laabay kaddib markii kiiski ugu horeeyay cudurka Covid-19 dalka laga xaqiijiyay.
Dhanka kale, guddiga adeegga macallimiinta ee TSC ayaa ku booriyay barayaasha da’doodu tahay 58 iyo wixii ka sarreeya iyo kuwa qaba xaalado caafimaad oo horay u jiray inay ka soo shaqeeyaan guriyahooda sida ay shir jaraa’id ka sheegtay madaxa fulinta ee guddiga TSC Nancy Macharia oo xusatay in ay u hoggaansamayaan amar madaxweyne.